किन लाग्छ खानापछि निद्रा ? के यसको समाधान पनि हुन्छ ? « Nepal Health News
किन लाग्छ खानापछि निद्रा ? के यसको समाधान पनि हुन्छ ?
२०७६, २५ बैशाख बुधबार ०८:५८ मा प्रकाशित
प्रायः मानिसलाई खाना खाएपछि निद्राले च्याप्ने गर्छ । कतिपयले त खानापछि आराम गर्ने वा केही बेर सुत्ने तालिका नै बनाएका हुन्छन् । यद्यपि, बेलुकासमेत खानेबित्तिकै नसुत्न चिकित्सकले सल्लाह दिने गर्छन् । किनकि, यसो गर्दा पाचन प्रक्रियामा समस्या सिर्जना हुने हुन्छ । खानालगत्तै निद्रा लाग्ने कारणबारे भने निकै कमलाई जानकारी हुन सक्छ । अब जान्नुहोस्, यसकारण लाग्छ खानालगत्तै निद्राः
प्रत्येक दिन मानिसलाई खानालगत्तै निद्रा नलाग्न पनि सक्छ । तर, वास्तविकता के हो भने प्रायःलाई खाना खाएपछि निद्रा लाग्ने गर्छ । सामान्य भाषामा यस्तो बानीलाई ‘फुड कोमा’ भन्ने गरिन्छ । यसका थुप्रै कारण छन् ।
अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट पाइने खानाको सेवनपछि शरीरमा इन्सुलिन बन्न थाल्छ । र, यसले ट्रिप्टोफेनको निर्माण गर्छ । यो मस्तिष्कमा पुगेपछि सेरोटोनिन बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र मेलाटोनिनका कारण मानिसलाई निद्रा लाग्ने गर्छ ।
फुड कोमाबाट बच्न खानाको तौर–तरिकाबारे जानकारी राख्न जरुरी रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
यसबाट बच्न खानाको मात्रामा पनि ध्यान पु-याउनुपर्छ । एकैपटक ठूलो परिमाणमा खाना खानुको सट्टा थोरै–थोरै खाना छोटो–छोटो अवधिमा प्रयोग गर्दा निकै राम्रो हुन्छ ।
यसका लागि डाइट पनि सन्तुलित मात्रामा लिँदा राम्रो हुन्छ । जसमा काब्र्सको मात्रा कम र पोषण तत्वको मात्रा बढी हुन जरुरी हुन्छ ।
खाना खाएपछि आरामसँग कुर्सीमा बस्ने बानी गर्नुहुँदैन । यसको साटो केही समय टहलिने वा क्रियाशील रहने गर्नुपर्छ । यसो गर्दा राम्रोसँग खाना पच्नुका साथै रगतमा चिनीको मात्रा पनि नियन्त्रण हुन्छ ।एजेन्सी
पेट बढ्यो, नो प्रोब्लम
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ असोज २९ । प्रविधि तथा अन्य सुविधाका कारण मानिसहरुलाई मोटोपनको समस्याले खुबै
चेस्टको एक्सरसाइज गर्न…
एक्सरसाइजले मानिसलाई स्वस्थ बनाउँछ । यसले पेट घटाउन, बढाउन, हातको मसल घटाउन–बढाउन मद्दत गर्छ । शरीरका सबै
यसरी घटाउन सकिन्छ तौल
सौखिन जीवनशैली, असन्तुलित खानपान र व्यायामका लागि पर्याप्त समय अभावजस्ता कुराले मानिसको तौल बढ्दो छ
नेपाल औषधि उत्पादक संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले पायो पूर्णताः कसले के जिम्मेवारी पाए ?
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । नेपाल औषधि उत्पादक संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छ । नवनिर्वाचित
स्तन क्यान्सर सचेतना महिना २०१९ः डा. कस्तुरीले सुनाइन् आफ्नो क्यान्सर कथा
जनस्वास्थ्य सरोकार, ललितपुर । स्तन क्यान्सरबारे जागरुकता बढाउन अक्टोबर महिनालाई स्तन क्यान्सर सचेतना महिनाका रुपमा
भोली हुने भनिएको न्याम्सको पिजी इन्ट्रान्स परीक्षा निश्चितकालका लागि रोकियो
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं– चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्सले) यस वर्षको लागि खुलाएको पोस्ट ग्राजु्यट तर्फको प्रवेश
स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे पत्र, दरबन्दी नभए पनि समायोजन भएका सबैलाई हाजिर गराउनू
जनस्वास्थ्य सरोकार काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी र दरबन्दी नै नभएका स्थानमा समायोजन
यौन हिंसा: असुरक्षा र न्याय नपाउने डरले ‘झन्डै ५० प्रतिशत पीडित महिलाले बयान फेर्छन्’
यौन हिंसा र मानव बेचबिखनमा परेका महिलाले प्रायः बयान फेर्ने गरेको कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।